कक्षा १२ मा पढ्ने युवाको गुहार मलाई ब्लोड क्यान्सर छ, बचाई दिनुस म बच्न चन्हन्छु ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कक्षा १२ मा पढ्ने युवाको गुहार मलाई ब्लोड क्यान्सर छ, बचाई दिनुस म बच्न चन्हन्छु !
देशमा अहिले कोरोनाले महामारीको रुप लिएको छ । नेपालमा बन्दाबन्दि (लकडाउन) भएको ८० औं दिन पुगेको छ । कोरोनाको कारणले अहिले सबैमा त्रासमा बाचिरहेका छन् । लामो समय सम्म बन्दाबन्दि (लकडाउन) को कारणले मध्यम तथा निम्न वर्गिय परिवारमा ठुलो समस्या उत्पन्न भएको छ ।
अब मध्यम तथा निम्न वर्गिय परिवारमा कोरोनाले भन्दा पनि भोकले मरिने हो कि भन्न चिन्ता बढेको छ । दिनभर काम गरेर बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने परिवारहरुका अहिले हातमुख जोड्न अत्यन्तै समस्या र्सिजना भएको छ । अझ भनै यस्तो बेलामा परिवारका कुनै सदस्यहरु बिरामी परे भने केसरी उपचार गर्ने होला । सार्वजनीक सवारी नचलेको कारणले सामान्य किसिमको बिरामी भए पनि एम्बुलेन्स आवश्यक छ । यस्तो समस्या कसैको परिवारमा नआवस भन्ने चाहाना हुन्छ ।
तर विडम्बना सुजन खड्काको परिवारमा कोरोनाको महामारीले थिचेको बेला अर्को ठुलो समस्या उत्पन्न भएको छ । नवलपुर जिल्लाको बौदिकाली गाँउपालिका ३ का सुरज खड्का लाई ब्लड क्यान्सर भएको छ । परिवारको आर्थिक अवस्था कम्जोर रहेको सुजनको परिवारमा निरन्तर उपचार गराउदा आर्थिक समस्या परेको छ । हाल भरतपुर क्यानसर अस्पतालमा उपचाररत रहेका खड्काको उपचारका लागि सहयोग गरिदिन परिवारले आग्रह गरेका छन् । आफ्नै भाई छोरा सम्झिएर सक्दो सहयोग गरि सुजनको जिवन रक्षा गरिदिन सुजनको दिदि मेलीना खड्काले आग्रह गर्नुभएको छ ।
सुजनको उपचारमा सहयोग गर्न गरिमा विकास बैंकमा मेलिना खड्काको नाममा रहेका खाता नंम्बर ०२८०१३००६८८९६१०००००१ म सहयोग गर्न सकिने मेलिना खड्काले बताउनुभयो । सुजनको बारेमा थप जानकारी लिन चाहेका मेलिना खड्काको ९८४८६१६८५८ मा सम्र्पक गरि आवश्यक जानकारी लिन सकिने छ । सुजन कक्षा १२ मा अध्यय्नरत विद्यार्थी हुन ।
दाङमा एकै दिन देखिए ५६ जना कोरोना संक्रमित
सडकमा लम्पसार परेर सरकारको विरोध,हेर्नुहोस तस्बिरहरु सहित…………
ललितपुरको वडा नं ६ मा उपत्यका बाहिरकालाई प्रवेश नि’षेध [जानकारीको लागी सबैलाई शेयर गर्नुहोस]